Weerar lama filaan ah oo Hawaii ay ku qaadeen Shiinaha iyo Ruushka, qalalaasaha ka dhacay Eswatini wuxuu lahaa in Taiwan lagu qoro
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Shiinaha » Weerar lama filaan ah oo Hawaii ay ku qaadeen Shiinaha iyo Ruushka, qalalaasaha ka dhacay Eswatini wuxuu lahaa in Taiwan lagu qoro
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Shiinaha • Eswatini Breaking News • Wararka Dowladda • News • Wararka Ruushka • Wararka Jebinta ee Taiwan • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Wadahadalka Nukliyeerka ee Ruushka Shiinaha
Sheegashada Shiinaha ee Taiwan waxay umuuqataa inay noqoneyso qatar caalami ah. Dhoolatus milatari oo 200 mayl ka baxsan xeebta Hawaii, sarkaal Japan ah oo uga digaya Mareykanka weerarka Shiinaha iyo Ruushka, isku day la doonayo in lagu afgambiyo dowladda Boqortooyada Eswatini, ayaa laga yaabaa inay aad isugu dhow yihiin.
Hawaii ma ku hanjabtay weerar lama filaan ah oo Russia iyo Shiinaha ka dhan ah Taiwan?
Boqortooyada Eswatini ayaa kujirta xaalad jahwareer ah kadib markii koox muhaajiriin ajaaniib ah ay isku dayayaan inay afgembiyaan boqortooyada. Tani waxay sidoo kale si aad ah ula xiriiri kartaa khilaafka Shiinaha iyo Taiwan
Mareykanku wuxuu ilaaliyay xiriir saaxiibtinimo wuxuuna siiyay hub uu ku caawiyo Taiwan. Eswatini waa dalka kaliya ee Afrika ee xiriir diblomaasiyadeed la leh Taiwan. Layaab malahan in Mareykanku uu safaarad weyn ka dhistay boqortooyadan yar ee dadkeedu kayaryahay 2 milyan oo qof.
Kaliya laba toddobaad kahor Diyaaradaha Dagaalka Mareykanka Raptor waxay ahayd inay kacdo si ay u xakameyso layliga Ruushka ee biyaha ku dhow US Pacific State of Hawaii.
"Waa inaan tusno sida looga hortagayo Shiinaha, oo kaliya ma ahan Shiinaha laakiin sidoo kale Ruushka, maxaa yeelay, sidaan kuu sheegay, waxay wada sameynayaan laylisyadooda," ayuu yiri wasiir ku xigeenka gaashaandhigga Japan Yasuhide Nakayama tjir Machadka Hudson Isbuucaan.
Hadaad fiiriso wararka ka imanaya Zvezda, oo ah warbixin Ruush ah, warka ka soo baxay militariga Ruushka, runti waxay hadda ku jimicsanayaan isla Honolulu horteeda.
Waxaana jira maraakiib dagaal, gujisyo nukliyeer iyo diyaarado waaweyn. Waxayna runtii ku jimicsanayaan dhanka hore ee qaybta galbeed ee Honolulu.
Ma doonayo inaan xasuusiyo 70 sano ka hor Pearl Harbor waxaa lagu soo weeraray si lama filaan ah. Waa inaan ka taxaddarnaa hawlgallada tababarka milatari ee noocan oo kale ah ee Ruushka.
Shil maahan, Rushka ayaa xushay meesha, dhanka galbeed ee Honolulu, Hawaii. Hawaii gudaheeda, waxaa kujira markab todobaad oo Mareykan ah sidoo kale PACOM waxay xarunteedu tahay Hawaii.
Markab basaas ah oo Ruush ah ayaa ku xira waqooyiga Oahu, Hawaii, sida lagu sheegay warbixin ay daabacday qoraalkan.
Aqalka Cad, dawladda Mareykanka ayaa sidoo kale faallo ka bixisay Hong Kong.
U nuglaanta Taiwan ee duulaanka ka socda dhul weynaha Shiinaha ayaa mashquul ku noqday istiraatiijiyad Indo-Pacific ah bilihii la soo dhaafay, iyada oo ciidamada Shuuciga Shiinaha ay kordhiyeen carbiska milatari ee ku teedsan jasiiradda. Nakayama, oo si aan caadi ahayn uga hadlay baahida loo qabo dalal dimuqraadi ah si loo hubiyo jiritaanka Taiwan, wuxuu si maldahan u sheegay in Ruushka iyo Shiinaha ay u shaqeynayaan sidii xulafo isu diyaarinaya dagaal weyn oo ay la galaan Mareykanka.
Reer Taiwan runtii waa isku duuban yihiin. Waxay diiradda saarayaan labada waddan ee waawayn iskaashiga iyo [soo bandhiga] khatar badan oo ku wajahan Taiwan. ”
Saraakiisha Communist-ka Shiinaha waxay Taiwan u arkaan gobol gob-goosad ah, oo ay sheegteen tan iyo markii ay xukunka qabsadeen 1949 laakiin waligood maamulin. Wadammada badankood waxay u aqoonsan yihiin maamulka ka jira Beijing dowladda rasmiga ah ee Shiinaha mana lahan xiriir diblomaasiyadeed rasmi ah Taiwan, in kasta oo Mareykanku uu ilaaliyay xiriir saaxiibtinimo isla markaana uu siiyay hub uu ku caawiyo mas'uuliyiinta Taiwan inay ka hortagaan duulaan ka yimaada dhul weynaha.
"Waa inaan ilaashanaa Taiwan dal dimoqraadi ah," wasiir ku xigeenka gaashaan dhigga Japan Nakayama.
Tani waxay si sax ah u noqon kartaa sababta dhinaca kale ee adduunka, boqortooyada yar ee Eswatini oo ay la socdaan 1.3 milyan oo qof, Mareykanku wuxuu leeyahay mid ka mid ah safaaradaha ugu waaweyn adduunka.
Eswatini waa dalka kaliya ee Afrika ee Taiwan u aqoonsan dal ahaan. Mareykanka wuxuu umuuqdaa inuu daneynayo xaaladdan. Shiinuhu wuu xanaaqsan yahay lagana yaabee inuu ka danbeeyo qalalaasaha iyo isku day afgambiga hada ka socda Eswatini. Wasiirkii hore ee arrimaha dibedda ee ZImbabwe, Walter Mzembi ayaa taariikh ka siiyay eTurboNews horaantii toddobaadkan maqaal cinwaankiisu ahaa: Eswatini ayaa lagu qabtay inta udhaxeysa Shiinaha iyo Taiwan.
Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibedda Shiinaha Wang Wenbine ayaa ku tilmaamay bayaankii Jabbaan ee ku saabsanaa suurtagalnimada weerar lagu qaado Hawaii inuu yahay mid aad u khatar badan sidoo kale wuxuu ka carooday Japan oo Taiwan ugu yeertay dal. Wuxuu yiri: "Waxaan ka codsaneynaa Japan in ay cadeyso cadeynta ah in Taiwan aysan wadan aheyn, lana hubiyo in waxyaabahaas oo kale aysan dib u dhicin."
Nakayama wuxuu carrabka ku adkeeyay in xiisadaha ka jira gobolka Indo-Pacific ay saameyn toos ah ku leeyihiin amniga Mareykanka, gaar ahaan marka la eego isku xirka Shiinaha iyo Ruushka. Wuxuu u waday guriga isagoo xasuusinaya weerarkii lama filaanka ahaa ee Jabbaan ku qaaday Pearl Harbor 70 sano ka hor, kaasoo ka xanaajiyay faragalinta militariga Mareykanka ee Dagaalkii Labaad ee Adduunka.
Saraakiisha Ruushka waxay ku tilmaameen "gantaalaha iyo madaafiicda ay ridayaan" badda Pacific-ga inay tahay hubin qalab. Nakayama, hawlgallada noocan oo kale ah waxay caddeeyaan in Japan iyo Mareykanka ay leeyihiin dhibaato guud oo u baahan in si wadajir ah looga hortago.
Hoggaamiyeyaasha Mareykanka iyo Japan waxay yiraahdeen waxay xoojinayaan qalabkooda si ay ula dagaallamaan hanjabaadaha Shiinaha iyo Waqooyiga Kuuriya, oo ay kujirto mowqifka dagaal ee Beijing ee ku wajahan Taiwan, maadaama maamulka Biden uu isku dayayo inuu goob joog ka ahaado gobolka.